Raysalwasaareha Ethiopia Abiye Axmed oo Kagudbi La Aqabadaha Tigreega. | ogaden24
Raysalwasaareha Ethiopia Abiye Axmed oo Kagudbi La Aqabadaha Tigreega.
Xog rasmi ah oo ay helayso Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in taliska cusub ee wayaanuhu uu mashquul kuhayay xalanti aqabado waawayn oo kaga imaanaya dhinaca siyaasiyiinta iyo ciidanka qoomiyada Tigreega.
Sida xogta aan kuhelayno aqabada dhowr ah ayaa horyaala taliska wayaanaha Abiye Axmed, kuwaas oo xalintoodu ay ku adagtahay wakhti xaadirkan waxaana aqabadahan kamid ah hirgalinta go’aankiisii ahaa in uu wareejiyo magaalada caanka ah ee Badame iyo in uu xilal kaqaado saraakiil Tigree ah oo isu haystay lama taabtaan.
Qaar kamid ah raga miisaanka ku dhex leh qoomiyada Tigreega oo saxaafada lahadlay ayaa sheegay in aysan ku faraxsanayn sida ay wax usocdaan, waxayna tilmaameen in ay beenin doonaan riyada Raysal-wasaare kusheega cusub ee Itoobiya Abiye Axmed.
Saraakiisha hadalada culculus soo jeediyay waxaa kamid ahaa gudoomiyaha kooxda TPLF Debresion Gebremacheal, kaas oo sheegay in taliska cusub ee wayaanuhu uu qoomiyada Tigreega weerar kuyahay iyaguna ay diyaar garoobo si ay isaga difaacaan.
Sidoo kale waxaa hadal kulul jeediyay Genaral Samore Yonis oo markaas ahaa taliyaha ciidamada Gumaysiga, wuxuuna Samore go’aamada taliska kusheegay kuwo ciidamada lagu yasayo isla markaana lagu bartilmaameed sanayo qoomiyado gaar ah, wuxuuna sheegay in aan la ogolaan karin.
Waxaase arinta baasiin kusii shubay kadib markii Abiye Axmed uu xilalkii kaqaaday General Samore Yonis oo ahaa taliyihii ciidanka gumaysiga iyo taliyihii ciidanka sirdoonka wayaanaha Genaral Chetachew Assafa, kuwaas oo ahaa labada tiir ee kaliya ee qoomiyada Tigreegu ay kutaagan tahay.
Sidoo kale waxaa soobaxay go’aankii uu taliska wayaanuhu ku ogolaaday in uu wadanka Eritrea kuwareejiyo dhulkii uu horaan uga qabsaday, kaas oo noqday mid qoomiyada Tigreega aad uga xanaajiyay, waxayna hada qoomiyadu umuuqataa mid udiyaar garaysan sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen.
Website ka ku hadla afka qoomiyada Tigreega ee Tirey Online ayaa sheegay in ay qoomiyadu xaq uleedahay in ay aayahooda katashadaan iyagoo adeegsanaya qodobka 39aad ee tastuurka Itoobiya kaas oo ogol in ay goosan karaan